Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta oo abaalmarino guddoonsiiyay fanaaniin guuleystay – Radio Muqdisho
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta oo abaalmarino guddoonsiiyay fanaaniin guuleystay
Kulan ay yeesheen Golaha Abwaannada Soomaaliyeed oo lagu qiimeeynayay heesaha Fanaaniinta Da’da yar ee Soomaaliga ayaa xalay lagu qabtay Xarunta Akadeemiyada Cilmiga, Fanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho.
Kulankan oo ay ka soo qayb galeen Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya, xubno ka tirsan Golaha Abwaanada Soomaaliyeed, Qaar kamid ah Fanaaniinta Soomaaliyeed, Miyuusikyahanno, Khuburro ka tirsan Fanka Soomaaliyeed iyo martisharaf kala gedisan oo lagu casuumay kulanka.
Intii uu kulanka socday Golaha Abwaanada Soomaaliyeed waxa ay qiimeeyn ku sameeyeen gaar ahaan Fanaaniinta da’da yar kuwaasi oo ay kamid yihiin Khadar Keyow iyo Sacdiya Siman kadib markii ay halkaasi iyaga iyo fanaaniin kale ay kusoo bandhigeen heeso kala duwan oo ay dhageysteen dadkii kasoo qayb galay kulankaasi.
Khadar Keyow iyo Sacdiyo Siman ayaa ku guuleeystay in loo aqoonsado fanaaniinta sanadka 2018-ka.
Agaasimaha guud ee Wasaaradad Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-cadaala oo halkaasi hadal kooban ka jeediyay ayaa isagoo ku hadlayay afka Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya oo safar shaqo ku maqan ku aammaanay Golaha Abwaanada Soomaaliyeed iyo dadkii kasoo shaqeeyay in ay maskaxdooda geliyaan taabagelinta howshan.
Khadar Keyow iyo Sacdiyo Siman ayaa lagu guddoonsiiyay abaal marino ka turjumaysa guusha qiimeynta kadib, Khadar Keyow oo hadal ka jeediyay ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay qiimeeynta la sameeyay, isagoo u mahadceliyay Guddiga shaqada hagar la’aaneed ay qabteen iyo si lamid ah dadkii gacan ku siiyay inuu noqdo fanan ku heesa afka Hooyo.
Xarunta Akadeemiyada Cilmiga, Fanka iyo suugaanta ayaa ah hay’ad mas’uul ka ah dhowrista iyo kormeerista dhaqanka iyo waxyaabaha muhiim-ka u ah Qaranka Soomaaliya.
Elman oo ku guuleysatay Horyaalka Xidigaha